Etazonia : Manaiky ny maha kandidà azy telo – MyDago.com aime Madagascar
Etazonia : Manaiky ny maha kandidà azy telo
Feno 237 taona rahampitso 04 Jolay 2013 ny nahazoan’i Etazonia ny fahaleovantenany. Ho an’ny masoivohon’ny Amerikana miasa sy monina eto amintsika dia androany no nanatanterahana ny lanonana teny Andranomena.
Nisy ny kabary nataon’Andriamatoa ERIC WONG, MPIANDRAIKI-DRAHARAHA Amerikana tamin’izany.Namaky ny ampahany fohy tamin’ny hafatra nomen’ny Filoha Barack Obama ho an’ny Fetin’ny 4 Jolay ny tenany, ary navoakan’ny Maison Blanche halina. Hoy indrindra ny Filoha Obama: “Rehefa tonga ny Fetim-pirenena Amerikana, dia indreo isika mankalaza ny zava-bitan’ireo tia tanindrazana feno fahasahiana, izay nanao sonia fanambarana iray ka nitarika revolisiona nanafaka antsika. Tsy mbola fantatr’ireto tia tanindrazana ireto akory ny tena endrik’ilay demokrasia nimatesany tamin’ny taona 1776, saingy tsy niady tamin’ny jadona nataon’ny mpanjaka iray izy ireo mba hahafahan’ny olom-bitsy hanjakazaka na ny namana akaiky hahazo tombony manokana. Ny nentin’izy ireo dia governemanta avy ao amin’ny vahoaka, najoron’ny vahoaka sady miasa ho an’ny vahoaka, ka nankinin’izy ireo tamin’ny taranaka tsirairay ho avy ny fitandroana ilay velirano nijoroana. “ Ny maha-Amerikana antsika dia ny fijoroantsika hiaro foto-kevitra iray… milaza fa mitovy isika rehetra. Izany hevitra izany no mbola mibaiko antsika, ary manosika antsika hitondra ny fanilo sarobidin’ny fahafahana ho any amin’ny ho avy mbola tsy fantatra.” Izany tenin’ny Filoha Obama izany dia ahatafarana tsara ireo soatoavina nohindrahindrain’i Etazonia hatramin’ny niforonany tamin’ny taona 1776. Anisan’izany ny fiankinana amin’ny tanjaky ny demokrasia sy ny lamina demokratika; fiankinana amin’ireo zon’olombelona fototra; ary fiankinana amin’ny fitovian’ny rehetra manoloana ny lalàna. Marina fa mandrafitra ampahany manan-danja ao amin’ny tantaran’i Etazonia sy ny maha-izy azy ny Amerikana ireo soatoavina ireo, ankehitriny kosa dia efa eken’ny firenena maro maneran-tany ny fahamarinany. Tsy latsa-danja amin’izany ny vahoaka Malagasy. Ny fiarovana ny demokrasia, ny zon’olombelona fototra ary ny fitoviana manoloana ny lalàna, no tokony ho tanjon’ireo mitady vahaolana ho an’ny disadisa politika eto Madagasikara. Mbola soatoavina Amerikana fototra iray koa ny fiankinana amin’ny tanjaky ny fitondrana mijoro araka ny lalàm-panorenana, soatoavina izay ankamamian’ny vahoaka miaina fahafahana rehetra maneran-tany. Nandritra ny tantaran’i Etazonia iray manontolo, dia iray ihany ny Lalàm-panorenana nisy, dia ilay vita sonia voalohany tamin’ny taona 1789—io ilay Lalàm-panorenana miantomboka amin’ny teny hoe “Izahay Vahoaka.” “Izahay vahoaka.” Io fehezan-teny io, mihoatra ny noho ny fehezan-teny rehetra hafa, no namaritra an’i Etazonia. Olona an-tapitrisany no nahazo hery tamin’io fehezan-teny io, ary io fehezan-teny io ihany koa no ivo ifotoran’ny asa ataonay eto Madagasikara.
Mino izahay fa ilaina ny mampiasa vola ho an’ny mponina eto amin’ity firenena ity, ka mba ho ny Malagasy no hanapa-kevitra ny amin’izay ho endriky ny ho aviny. Mamelà ahy ary ianao hanao fanamarihana vitsivitsy momba ny fifidianana eto Madagasikara. • Voalohany indrindra, toy ireo mpiara-miombon’antoka hafa ao anatin’ny Groupe de Contact International ho an’i Madagasikara, ny tanjon’i Etazonia dia ny hitsaharan’ny olana ara-politika sy ara-toe-karena izay nandrava ity firenena ity hatramin’ny fanonganam-panjakana tamin’ny taona 2009. Ny hany làlana ivoahana amin’izany dia ny fifidianana malalaka, ara-drariny ary mangarahara, araka ny vinavina ao amin’ny Tondrozotra tohanan’ny SADC. • Faharoa, raha tiana hahomby ny fifidianana, ankoatry ny fanomanana ara-teknika dia tokony hisy tontolo ara-politika ahitana fanajana ny fahalalahan’ny fanehoan-kevitra sy famoriana olona, ahitana mpanao gazety afaka mampita vaovao ka tsy hatahotra sazy, ary ahitana manam-pahefana manabe voho ny zon’olombelona sy ny fanjakana tsara tantana. • Fahatelo, ny disadisa ara-politika miverina lava eto Madagasikara dia matetika vokatry ny fifidianana tsy eken’ireo mpandray anjara misongadina nefa nahatsapa voailikilika tao anatin’izany. Noho izany dia tohanan’i Etazonia ny rafi-pifidianana izay manaiky ny fandraisana anjaran’izay mpirotsaka hofidiana rehetra mahafeno ara-dalàna sy ara-drariny ny fepetra takian’ny lalàna manan-kery eto Madagasikara, ary mifanaraka amin’ny vontoatiny sy ny hevitra nandrafetana ny Tondrozotra tohanan’ny SADC. • Farany, tsy i Etazonia mihitsy no hitsara mialoha izay ho vokatry ny fifidianana. Tohananay ny zon’ny vahoaka Malagasy hifidy ny mpitondra azy ao anatin’ny fifidianana malalaka, ara-drariny ary azo ekena; ary tohananay ny ezaka ataon’ny SADC hahitana vahaolana azo itokisana sady mampandray anjara ny rehetra hamahana ny olana ara- politika eto Madagasikara. Mijoro eo akain’ny vahoaka Malagasy hatrany i Etazonia. Ao anatin’ny krizy no iezahanay itondrana fanantenana. Mitondra fanantenana ho an’ity firenena ity izahay amin’ny alàlan’ireo Volontaire avy amin’ny Corps de la Paix miisa 150, izay mahay miteny Malagasy ary monina eto mandritra ny roa taona mba hanatontosa tetik’asa ho an’ny isan-tanàna manerana ny firenena. Mitondra fanantenana izahay amin’ny alàlan’ny fanomezana fanampiana mivantana ny mponina eto Madagasikara mihoatra noho ny ataon’ny firenena hafa na iza na iza, hanamafisana orina ny fanjariana ara-tsakafo sy ny fiadiana amin’ny loza entin’ny tazomoka amin’ny alàlan’ny Birao Amerikana misahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena (USAID) sy ny Ivon-toerana ho an’ny ady amin’ny areti-mifindra (CDC). Mitondra fanantenana izahay amin’ny alàlan’ny fanampiana amin’ny fanabeazam-boho ny hatsaran’ny natiora sy ny harena voajanahary ananan’ity firenena ity, amin’ny alàlan’ireo hetsika fanentanana momba ny tontolo iainana. Mitondra fanantenana izahay amin’ny alàlan’ny fanampiana ny tanora, ny mpanao gazety ary ny fiaraha-monim-pirenena ho afaka mampiasa ireo zava-baovao sy teknolojia farany indrindra any amin’ireo foibe ara-kolotsaina sy ara-tserasera mivantana manerana ny firenena. Izany vina feno fanantenana ho an’ny harena ananan’i Madagasikara izany ihany koa no manosika ny maro eo amin’ny sehatry ny fandraharahana.
Koa mamela ahy hianareo hanararaotra izao fotoana izao hanehoana fankasitrahana ho an’ny mpanohana maro malala-tànana nanampy tamin’ny fanatontosana izao lanonana ho an’ny 4 Jolay izao. Ny tsirairay amin’ireo mpanohana avy amin’ny sehatra tsy miankina ireo dia misolo tena orinasa, entam-barotra na raharaha Amerikana iray manokana—ary ny tsirairay amin’izy ireo dia mifampizara ilay vina hahatongavan’ny Madagasikara mitondra fahombiazana sy fandrosoana ho an’ny vahoaka Malagasy. Koa fisaorana no atolotra ny orinasa Century 21 Madagascar; ExxonMobil; Fedex/Interex SA; Henri Fraise (misolo tena ny Caterpillar); Microsoft; Teknet Group (misolo tena ny Apple Computer); ary ny World Trade Center Antananarivo. Eto am-pamaranana, dia mino i Etazonia fa raha misy rafitra najoro teo amin’ny foto-kevitra demokratika sy ny fahatokiana tsy azo hozongozonina ny amin’ny ho avy, dia azon’ny vahoaka Malagasy atao ny manorina ho avy vaovao ho an’ity firenena ity. Azo antoka aloha fa hitohy hatrany ny fampiasanay vola ho an’ny vahoaka Malagasy. Ho avy miorina amin’ny foto-kevitra hoe “Izahay vahoaka.” Raha mampiasa vola ho an’ny taranaka ho avy mantsy isika, raha toa mampirisika ny hafa hahatakatra ilay vina ho an’i Madagasikara miorina amin’ny harena kobonin’ny ho avy—fa tsy amin’ny olana nentin’ny lasa—dia azo antoka fa hitondra fanantenana, fanavaozana ary tombontsoa izany ho avy izany. Mirary ny soa rehetra ho anareo amin’izao fotoana ankalazantsika ny fahaleovan-tenan’i Amerika—sy ny ho avin’i Madagasikara izao.
Tsy izy izao fitondrana izao ary tsy ekena ny référendum 17 Novambra 2010 hoy Etazonia !
Auteur Solo Razafy*Publié le 3 juillet 2013 3 juillet 2013 Catégories Politique
4 pensées sur “Etazonia : Manaiky ny maha kandidà azy telo”
3 juillet 2013 à 22 h 57 min
SOA FA MBOLA TEO INGAHY OBAMA ASA RAHA MBA
Tsara ny fijoroan’i Be kintana toy izao fa efa tsy rariny loatra ny zavamisy
fa tokony mba mandeha lavi-davitra izy fa tsy mijanona eo.
4 juillet 2013 à 0 h 21 min
Aoka izay mahay mamaky ny teny tsotra hamaky ary izay manan-tsofina hihaino ary izay manan-tsaina handinika sy hamakafaka ity fanambarana nataon’Andriamatoa WONG mivantana amin’ny teny malagasy..
Io fanambarana io no vina ho tanterahan’ny Amerikanina eto Amintsika raha toa ka mijoro « ho VAHOAKA IRAY ISIKA » ary mifidy mpitondra manaja ny démocratie sy ny fahafahana rehetra ( miteny ,mivory , manao gazety..)mba hahatsara ny HO AVINTSIKA…
Famporisihana Antsika hihaotra ny moramora ela loatra hiho-pefy mba handresena reo Antony mampikorontana ny Firenena matetika ,..
TSY MAINTSY MANOMANA SY MANANTATERAKA FIFIDIANANA DEMOCRATIKA , MILAMINA SY MANAJA NY FAHAFAHAN’NY VAHOAKA…!
AOKA ISIKA HITSAHATRA TSY HIHANAHANA INTSONY FA HIROBOKA, HIJORO ARY HIADY HO AMIN’IZAY HAHASOA NY FIRENENA SY NY VAHOAKA.
RIZAREO EFA VONONA NY HANAMPY ANTSIKA…NA ARA-TEKNIKA NA ARA-BOLA NA AMIN’NY ALALAN’NY PEACE CORPS IZAY NIVERINA ETO MADAGASIKARA REHEFA AVY NISINDA TANY AFRIKA ATSIMO TAO AORIAN’NY FANONGANAM-PANJAKANA..
ISIKA HAMPIANA INDRAY VE NO HIRAVIRAVY TANANA SY HISALASALA ?
ARY HAJANONY NY RESA-KE SY SENTO DISO TOERANA !
4 juillet 2013 à 0 h 40 min
Misy Antony ny fankalazana ny Fetim-pirenena amerikana ny 03 jolay ? Inona io atony io ?Toa ny mpitady vaovao izy ireo ka mahafantatra raha alohan’ny rehetra…!
Raha ny fihetsika ataon’ny USA amin’izao fotoana izao aty Afrique , any amin’ny Tany arabo , …ary eo koa ireo asan’ny vintsika amerikanina eo amin’ny sehatra diplomatika ary hono hoy aho : »Ahoana moa no anadinoin’ny Amerikanina ny fanambanam-bsy ( mis en joue ) ny imasoivohany tamin’ny 17 mars 2009 teny Antanimena ary ny fametavetana ny sainany ? Zavatra mkasika ny maha -merikanina azy ireo seho-javatra roa ireo : ny imaso ivohany ary ny sainany dia saro-pady aminy satria tena ny tenan-drizareo no niantsiana , koa tonga ve ny fotoana ..hanaovan-drizareo ny takalo-patsa vidin’ny tsy fahamendrehana nataon’ireo mpanongam-panjakana tamin’ny Amerikanina tamin’ny 17 mrs 2009 sy ny famingavingana nasehon’ireto mpitondra maivan-doha mikasika ny AGOA ?
Efa eo andrefan-tànana ireo te-hanampy Antsika hanavon-tena koa vonona ve sika sa..?
4 juillet 2013 à 6 h 40 min
Tokony izany hilaza @ SADC ny amerikanina hoe ekenay ny fifidianana malalaka sy eken’ny rehetra. Satria raha arahina ilay baiko n’y frantsay @ SADC, izany hoe hanova CES dia avy eo vao hamoaka lisitra vaovao sy Dati-pifidianana vaovao… Dia mety Any @ 2014 n’a 2015 Any ho any vao hisy fifidianana . Ka noho izany NA fifidianana @ volana aogositra na ny toromariky ny FFKM no arahina… Ireo lalana roa ireo dia i Andry Rajoelina daholo no sakana satria misy miaramila manohana azy.
Noho izany dia ny fidinanana an-dalambe n’a ady Samy miaramila no hirosoana ka safidy ny antsika.
Précédent Article précédent : LALAO RAVALOMANANA : IZAY AVOAKAN’NY LALANA NO EKENTSIKA
Suivant Article suivant : Katedraly Andohalo : Tsy mila vavaka Rajoelina